‘जुनसुकै बेला राजनीतिमा आउन सक्छुः महानायक राजेश हमाल – कमल खबर
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा द्वारा निषेधाज्ञाको समय थप
कमलमा हात्तिको आक्रमणमा बाट जितबहादुर मृत्यु
कमल गाउँपालिकामा कोभिड १९ को संक्रमण र नियन्त्रणका लागी सर्वपक्षिय बैठक
कोरोनाबाट बच्न ‘पत्रकारहरुका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्श
स्थानिय वासिका अवरोधका कारण शवदाह स्थल निर्माण स्थगित
‘पत्रकारहरुलाई विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्श’ कार्यक्रम
झापामा कोभिड १९ लाई जितेर घर फर्किनेको संख्या ४ हजार ५७६ जना कमल गाउँपालिकामा थप ४४ जना संक्रमित
विकासको गतीमा वडा नम्वर ३
कमल गाउँपालिकामा कोभिड १९ बाट संक्रमितहुनेको हुनेको संख्या ४८
Home/अन्तर्वार्ता/‘जुनसुकै बेला राजनीतिमा आउन सक्छुः महानायक राजेश हमाल
२०७६ जेष्ठ २९, बुधबार ०७:१३ गते
काठमाडौं –नेपाली सिने जगतका महानायक राजेश हमालले आफू जतिखेर पनि राजनीतिमा आउन सक्ने बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा हमालले आफू राजनीतिमा जतिबेला पनि राजनीतिकमा आउन सक्ने बताएका हुन् ।
भारतको लोकसभा निर्वाचनमा धेरै बलिउड कलाकार निर्वाचित भए। तपाईंको राजनीतिमा आउने सोच छैन ?
-मलाई राजनीतिमा चासो छ । राजनीतिक गतिविधि रुचिपूर्वक हेर्छु । तर, सक्रिय राजनीतिमा लागिहालौँ भन्ने मुड छैन् । अहिले कलाकारितामा छु । दुबै ठाउँमा हात हाल्नु ठिक होइन । चुनाव लडेका कतिपय भारतीय कलाकारले पछि मछुतो महसुस गरेको सबैलाई थाहा छ । तर, म राजनीतिमा आउनै नसक्ने भन्ने छैन ।
कहिलेबाट आउनुहुन्छ त ?
कुन कित्तामा उभिएर राजनीति गर्छु भन्ने पक्का छैन । सचेत नागरिकको हिसाबले राजनीतिमा चासो छ । तपाईंले चाहनुभयो भने त जुनै पार्टीले पनि टिकट देलान् नि ? मेरो उद्देश्य राजनीतिकको लागि राजनीति गर्ने होइन । त्यस्तो राजनीतिले खासै उपलव्धी दिएँदैन ।
खाली व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र पूरा हुन्छ । इमानदार भएर राजनीति गरियो भने नीति निर्माण तहमा केही प्रभाव पार्न सकिन्छ । राजनीतिमा लागेर राष्ट्रलाई अझै केही योगदान दिन सक्छु जस्तो लागेको दिन पक्कै राजेश हमाल राजनीतिमा होमिने छ । जतिखेर पनि राजनीतिमा आउन सक्छु । त्यो दिन पनि आउला नि ।
चुनाव जित्नुभयो भने पहिलो काम के गर्नुहुन्छ ?
देशमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । मैले चुनाव जितेको खण्डमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न कोसिस गर्छु । भ्रष्टाचाररहित विकासमा जोड दिन्छु ।
हाम्रोसरोकार डटकम बाट
बिर्तामोड गोल्डकपको उपाधि पूर्वेलीलाई
एमसिसिका विषयमा अन्यावश्यक हल्लाको पछाडी नलाग्न ढकालको आग्रह
२०७७ असार १२, शुक्रबार १३:१० गते
२०७८ बैशाख ३१, शुक्रबार ०९:२४ गते
२०७८ बैशाख ३०, बिहीबार १२:२८ गते
२०७८ बैशाख ३०, बिहीबार ११:४६ गते
२०७८ बैशाख २७, सोमबार १६:४४ गते
२०७८ बैशाख २६, आईतवार १८:४३ गते
‘बडो तनाव भएको थियो, अब कोरोनाविरुद्ध केन्द्रित हुने वातावरण बन्यो’
२०७७ बैशाख २२, सोमबार १२:३३ गते
२०७६ श्रावण १८, शनिबार १४:२३ गते
‘संघीय बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हेप्यो’ : आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो
२०७६ जेष्ठ २२, बुधबार ०७:०६ गते
रवीन्द्र अधिकारीको त्यो अन्तर्वार्ता
२०७५ फाल्गुन १८, शनिबार ०८:३१ गते